Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Mpitsabo mpanampy ao Ontario: Ahiahy amin'ny fasana amin'ny drafitra fanokafana vaovao
Ny governemanta Ontario dia manipy fitandremana amin'ny rivotra ary mampidi-doza ny fivoaran'ny faritany amin'ny fitazonana ny fihanaky ny viriosy COVID-19.
Ny fikambanan'ny mpitsabo mpanampy ao Ontario (RNAO) dia nilaza fa ny fahafahan'ny faritany mifehy ny fihanaky ny otrikaretina rehefa miditra amin'ny volana mangatsiaka isika dia filokana amin'ny alàlan'ny drafitra fanokafana indray izay mampiakatra ny fetran'ny fahafaha-manao hatramin'ny alatsinainy 25 oktobra, ary manafoana izany. fepetra momba ny fahasalamam-bahoaka - anisan'izany ny fitakiana porofo momba ny vaksiny - hatramin'ny volana Janoary.
Manahy mafy ihany koa ny RNAO fa ny governemanta dia nisafidy ny tsy hanao vaksiny tsy maintsy atao ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra amin'ny sehatra sy toerana rehetra. Efa misy io toromarika io ho an’ireo miasa amin’ny fikarakarana maharitra, ka ny 15 novambra no fe-potoana farany hanarahana izany. Maro amin’ireo toeram-pitsaboana marary no mandray fepetra mitovy amin’izany. Na izany aza, io fomba fiasa patchwork amin'ny politikan'ny governemanta Ford io dia mamela ny marary sy ny mpiasa any amin'ny ankamaroan'ny hopitaly, ny fikarakarana trano ary ny toerana misy ny vondrom-piarahamonina hafa amin'ny tahan'ny vulnerability ambony kokoa raha toa ka mamela toerana iray ho an'ny iray hafa ny mpiasa tsy vita vaksiny izay manana fepetra mora kokoa.
Politika mifototra amin'ny porofo ny fitakiana ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny fanabeazana rehetra hanao vaksiny tanteraka, izay nantsoin'ny RNAO voalohany tamin'ny Jolay 2021, ary vao haingana no tohanan'ny Tabilao Siansa an'ny governemanta. Ny tsy firaharahana ny torohevitra toy izany dia manohitra ny lojika, tsy tompon'andraikitra ary mampandefitra ny fikarakarana ny marary sy ny fiarovana ny mpiasa.
RNAO dia manentana ny olona hanohy hanao sonia ny Action Alert mitaky ny Premier Ford hanitarana ny vaksiny tsy maintsy atao amin'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny fanabeazana ary hametraka faritra azo antoka manodidina ny toeram-piasany. Ny fikambanana dia milaza fa ireo fepetra ilaina ilaina hiadiana amin'ny COVID-19.